arimo mucjiso ah iyo jeceyl
xeeso xul ah
albun sawiro ah
dil iyo dhac iyo jeceyl
meshan kala soco arimo mucjiso leh iyo kuwa kaloo ku sabsan jeceyl walaal
GABAR TOOGASHO KU DISHAY GABAR SAAXIIBTEED AHEYD OO ARIN QARSOODI AH KA KASHIFTAY?
Arrin mucjiso leh ayaa ka dhacday xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho kadib markii gabar magaceeda naloogu sheegay Faadumo oo degan carwada Taleex ay toogasho ku dishay gabar saaxibteed ahayd oo lagu magacaabo Xamdi, sidoo kalena dhaawac daran u geysatay gabar kale oo Xamdi la dhalatay oo lagu magacaabo Fardowza. Arrintan ayaa waxay dhacday kadib markii Faadumo & Xamdi oo saaxiibo ahaa ay is khilaafeen kadibna ay Xamdi kashiftay arrin qarsoodi u ahayd Faadumo oo ay labadooda isla ogaayeen taas oo ahayd Meher Faadumo ay la gashay wiil ay saaxiibo ahaayeen, taasina ay ka carootay Faadumo oo qori Ak-47 u soo qaadatay Xamdi oo ku sugnayd Shineemo ku taala Xaafadda Taleex oo lagu magacaabo Shineemada Gabadha. Dhacdadan oo dhacday Jimcihii la soo dhaafay ayaa warku sheegayaa in Faadumo markii ay falka geysatay la waayay meel ay jaan & cirib dhigtay, welina la baadigoobayo.
CANUG CALOOSHIISU BANAANKA TAALO OO MUQDISHO KU DHASHAY?
Canug Calooshiisu bannaanka taalo oo aan lahayn wax xuub & maqaar ku dahaaran Caloosha, laakiin jirka intiisa kale caadi ka ah ayaa ku dhashay Magaalada Muqdisho. Canugaas oo Hooyadiis lagu magacaabo Safiyo Ibraahim Maxamed ayaa la keenay Isbitaalka KMG ee Banaadir ee Magaalada Muqdisho, waxaana arrintiisa faraha kula jira Dr. C/risaaq.
WIIL HOOYADIIS FEERAY?
Hooyo lagu magacaabo Xaliimo oo degan degmada Madiina ayaa Isniintii dorraad wiilkeedu feer & laad ku qaadqaaday kadib markii ay Hooyadu damacday inay kala hadasho Wiilkeedaa Xaaskiisa oo uga soo dacwootay. Warku wuxuu intaa ku darayaa in wiilku uu isku dul garaacay Hooyada & xaaskiisa, isla markaana ay Hooyadu istaaga ka faniintay, iyadoo Hooyadu uu soo gaaray dhaawac daran.
XAFLAD MEHER OO WEERAR IYO ARBUSHAAD LAGU SOO QAADAY?
Iyadoo loo fadhiyo xaflad lagu Mehrinayay gabar lagu magacaabo Maryan Cali ayaa waxaa xafladdii weerar ku soo qaaday rag abtiyaal u ah Gabadha. Sida uu inoo soo sheegay Wariyaheena C/risaaq Jaamac Cilmi(Black Yare) gabadhaas ayaa waxaa soo korsaday abtiyaasheed oo degan Xaafadda Buula-xuubey ee degmada Madiina, waxayna u diideen wiil ay Jaclayd oo ka soo doontay, kadibna waxay wiilkii ula tagtay aabaheed oo degan agagaarka Isbitaal Digfer wuxuuna ka ogolaaday inuu isku mehriyo maadaama ay is doorteen, balse iyadoo meherkii loo fadhiyo ayay weerar hubeysan ku soo qaadeen abtiyaashii oo diidanaa in gabar ay iyaga soo korsadeen wiil aysan la rabin loo guuriyo, arrintaasna waxay sababtay in meherkii baaqdo, iskuna xumaadeen abtitaashii & Aabihii gabadha dhalay oo weli gartooda meel la saari la’ yahay
HAWEENEY 8-SANO UUR LAHEYD OO WAXYAABO MUCJISO LAGA SOO SAARAY?
Haweenay lagu magacaabo Faadumo Ismaaciil Maxamed oo muddo 8-sano ah uur mucjiso ah lahayd lagana keenay Tuulo ka tirsan magaalada Boosaaso ayaa Isbitaalka KMG ee Banaadir loogu sameeyay qaliin. Haweeneydaas oo loo malaynayay in ay uur lahayd muddadaas ayaa meeshii laga filayay in Canug ay dhasho laga keenay Malax dhowr liitar ahayd oo caloosha sidii uur oo kale ay ugu siday.
NIN AY AFDUUBATAY HAWEENEY UU GUUR KA DIIDEY?
Nin lagu magacaabo Maxamed Cumar oo 37-jir ah oo degan degmada Xamar jajab ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa afduubtay koox dablay ah oo ay soo adeejisay haweeney uu horey u qabay oo ka codsatay inuu dib ugu laabto, balse uu isaguna a diiday. Dablayda ayaa markii la weydiiyey sababta ay u heystaan ninkaa ku sheegay inay ku leeyihiin 3-kun oo doollar, balse mar dambe la ogaaday in xaaskiisii uu furay ay arrinta ka dambeyso, waxaana Isniintii dorraad lagu guulaystay in shuruud la’aan lagu soo daayo. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Warsame(Bidaaye) oo warkan inoo soo gudbiyey ayaa inoo soo sheegay in wiilkaas markii afduubka laga soo daayay uu u baqoolay Magaalada B/weyne ee Gobolka Hiiraan si uu halkaa ugu badbaado.
GABAR KA BADBAADAY SHIRQOOL DIL?
Gabar lagu magacaabo Hani C/raxmaan oo degan Xaafadda Buulo-xuubey agagaarka Ayraboorka ayaa ka badbaaday shirqool dil oo ay la damacsanaayeen wiilal la dhashay wiil uu Jacayl kala dhexeeyay oo waalidkeed u diideen. Sida ay inoo soo sheegtay wariyaheena Amran Axmed Cali Gabadhaa waxaa loo geystay jirdilka ba’an, iyadoo wiilashaa go’aankoodu ahaa inay dilaan kadib markii ay ku fakareen intii wiilkoodu u dhibaatoon lahaa ay iyada qaarijiyaan, sidaana uu kaga samro, balse taasi Alle ma qadarin